Sekureva kwa Prosser mangwana Apple ichavhura Apple Watch Series 6 uye itsva iPad | Ndinobva mac
Sekureva kwa Prosser mangwana Chipiri Apple ichavhura Apple Watch Series 6 uye ipad nyowani
Jon Prosser akangosvetukira mudziva imwe nguva zvakare. Mune twitter yakaburitswa zuro, anoti Apple yakatonyora nhepfenyuro ichizivisa nhepfenyuro nhanhatu dze Apple Watch uye modhi nyowani ye iPad. Tora izvozvi.
Kana ichi chiri chokwadi, (isu tinongofanirwa kumirira kusvika mangwana kuti tizive) zvichange zvichishamisa, tichifunga kuti iri kuuya rinokosha rekuzivisa iro iPhone 12 rave pedyo nekona. Kana kuvhurwa uku kukaitika mangwana, chinhu chekutanga chinoita kuti tifunge ndechekuti pamwe chakataurwa chakanonoka kusvika muna Gumiguru zvakare nekuda kwekunonoka kunozivikanwa mukugadzirwa kwePhones nyowani gore rino, uye Apple inoda kuisa izvi zviviri zvigadzirwa zvichitengeswa kana atovagadzirira. Tichaona kana Prosser ndizvozvo.
Sekureva kwaanozivikanwa leaker Jon Prosser, Apple inoronga kuburitsa kuburitswa kwenhau ichi Chipiri chaiye kuzivisa mhando nyowani dzePad uye mhando nyowani yeApple Watch Series 6. Tichaona kana ari pachokwadi.
Prosser anotsanangura kuti Apple ine pepanhau rakaburitswa Chipiri September 8 na15: 00 Spanish nguva. Inoti zvakare ichapa ruzivo rutsva kana paine shanduko mune izvi.
Ichave iri Apple Watch nhevedzano 6 uye nyowani isina kutaurwa iPad
Izvi zvinofungidzirwa kuburitswa neChipiri kwaizove kuzivisa kuvhurwa kweApple Watch uye ipad nyowani. Kunyangwe iwo matsva Apple Watch mhando dzingave dziri iyo akateedzana 6 Inotarisirwa, Prosser haana kutaura chero chinhu nezve iyo iPad modhi ichatanga mangwana.
Mumwedzi ichangopfuura pakave nemakuhwa akasiyana pamusoro peiyo nyowani-inodhura iPad uye nyowani iPad Mhepo 4. Kune zvakare kutaura mune ino Apple nyika kuti mitsva yakagadziridzwa iPad Pro mamodheru anogona kusvika mwedzi uno, saka zvinonetsa kuti uzive chaizvo kuti ndeipi iPad mhando dzichava dzekutanga kuona mwenje wezuva.
Apple rinoburitswa parizvino rakarongerwa Chipiri (Gunyana 8) na9: 00 am EST - zvakadaro, ndinofanira kuona kuti haina kuvharirwa mukati kudzamara mupepanhau waudzwa, zuva ra.
Ini ndichatumira tweet mangwanani iwayo kuti ndikugadzirise kana zvikachinja.
Chii chiri chechokwadi ndechekuti pakupera kwemwedzi wapfuura, Apple yakanyoreswa maApple Watches uye maPads manomwe muhurukuro dze Komisheni Yezvehupfumi yeEurasia (CEE), uye kwakadonha kwakasiyana senge inofungidzirwa kuraira bhuku remanyorerwo uye dhizaini yekugadzira zvabuda. Sumo dzakafanana dzeECE dzakatangira chigadzirwa chitsva cheApple chakatangisa kakawanda, kusanganisira akawanda mamodheru ePadad, iPad Pro, iPhone, Mac, Apple Watch, uye AirPods.
Izvo EEC zvikumbiro zvinonyatso simbisa kuti iyo nyowani Apple Watches uye angangoita maviri akasiyana maPad modhi achaburitsa munguva pfupi, saka Prosser yekudaidzira kuti chokuburitswa neChipiri icharatidza izvi zvitsva zvigadzirwa zvine musoro. Tichamirira mangwanani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Sekureva kwa Prosser mangwana Chipiri Apple ichavhura Apple Watch Series 6 uye ipad nyowani
Tora kutonga kuzere kwescreenshots paMacOS neMonosnap
Manage makarenda ako neTiki Chalenda, yemahara kwenguva shoma